रुपज्योतिको दु*खेसो : ‘श्रीमान् ! ज्योति परिवारको इ*ज्ज*त*मा ब*ला*त्का*र गर्न खोजियो’ « Swadesh Nepal
रुपज्योतिको दु*खेसो : ‘श्रीमान् ! ज्योति परिवारको इ*ज्ज*त*मा ब*ला*त्का*र गर्न खोजियो’
काठमाडौं । ठ-गी अ-भि-यो-ग-मा प-क्रा-उ परेका व्यवसायी रुपज्योति कंसाकारले आफूविरुद्ध ष-ड्य-न्त्र भएको बताएका छन् । उनले आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आफू नि र्दोष रहेको जिकिर गरेका हुन् ।
प्रहरीले गत बिहिबार विमानस्थलबाटै प-क्रा-उ गरेका कंसाकारलाई दोस्रोपटक म्याद थपका लागि अदालत ल्याएको थियो । न्यायाधीश ओमप्रसाद अर्यालको इजलाशले थप अनुसन्धानका लागि ५ दिन हि रा स त मा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।
सो क्रममा उनले आफूलाई हिरास-तमा राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै आफूलाई साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने जिकिर गरे । “मलाई कुन अ-भि-यो-ग-मा हिरासतमा राखियो ?” ज्योतिले पटकपटक कारण सोधे ।
न्यायाधीश अर्यालले ज्योतिको प्रश्नको जवाफ अदालतले दिनुपर्ने कारण नभएको भन्दै अदालतले जवाफ लिखितमा दिने बताए । अहिलेसम्म मुद्दा नै अदालतमा दर्ता नभएकाले अ-नुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयानमा आफ्नो कुरा भन्न ज्योतिलाई सुझाव दिएपछि ज्योतिले आफूलाई कानुनी कुरा थाहा नभएको भन्दै भूल सुधार गरेका थिए ।
प-क्रा-उ पुर्जी जारी भएको थाहा पाउँदा पाउँदै आफू नेपाल आएको, आफूमाथिको अ-भि-यो-ग-सँग सम्बन्धित प्रमाण समेत नष्ट गर्ने स-म्भावना नरहेको र देश छोडेर भाग्ने पनि नभएकाले आफूलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था नभएको उनको जिकिर थियो । ज्योति परिवारको इ-ज्ज-त-मा ब-ला-त्का-र भएको दु-खेसो पनि उनले पोखे ।
त्यस्तै, उनले आफू संलग्नै नभएको कम्पनीको कारोबारमा ज्योति परिवारका ११ जनाविरुद्द उ-जुरी दिएको भन्दै उजुरीकै आधारमा हिरा-सतमा राख्ने हो भने भोलि अरु व्यवसायीमाथि पनि यस्तो हुनसक्ने बताए ।
“श्रीमान् ! ज्योति परिवारको इ-ज्ज-त-मा ब-ला-त्का-र गर्न खोजिएको छ । मलाई हिरास-तमा राख्नुपर्ने कारण छैन,” उनले भने । आफूले ठ-गे-को भनेको रकम अदालतमा जम्मा गरिसकेकाले ठ-गी गरेको भन्ने आधार पनि नभएको उनको दाबी थियो ।
ज्योतिलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा राखिएको छ । तर, उनकी छोरी सुरुची भने उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएकी छन् ।
रुपज्योतिले आफूसँग विवाद मिलाउन भन्दै ५ करोड मागिएको पनि इजलाशसमक्ष बताए । प्रहरीले ज्योतिको कल डिटेल हेर्नुपर्ने, ठ गी गरेको कम्पनीको आधिकारिक दस्तावेज लगायतबारे थप अ-नुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै दोस्रो पटक म्याद थपका लागि अनुमति मागेको थियो ।